Mpandresy sy mpandresy ny tetikady marketing 2012 | Martech Zone
Mpandresy sy mpandresy ny tetikady marketing tamin'ny 2012
Zoma, Desambra 21, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa manomboka mijery ny taona lasa isika, mino aho fa zava-dehibe ny fahazoana sary mazava izay mitombo ny paikadim-barotra… na amin'ny lazany na amin'ny valiny. Zava-dehibe ihany koa ny fanekena ireo paikady izay nihazakazaky ny mpivarotra ary tsy namokatra ny valiny notadiaviny na nilainy.
Mpandresy tetikady marketing tamin'ny 2012
Backlinking - Iray amin'ny lahatsoratray mampiady hevitra sy malaza indrindra tamin'ny 2012 ny nanambara izany SEO maty. Na dia maro aza ireo consultant SEO no nibontsina fotsiny taorian'ny famakiana ny lohateny, ny ambiny kosa dia nahatakatra fa nesorin'i Google avy tao ambanin'izy ireo ny karipetra virtoaly ary tokony hijanona tsy hanandrana hamitaka ny algorithm izy ireo ary hanomboka hampiasa marketing mba hitondra ny fahefan'ny fikarohana ny marika. Tsara ho an'i Google ary fialamboly tsara ho an'ny backlinker SEO.
QR Codes - mba ilazao aho fa efa maty izy ireo. Matetika misy ny fandrosoana amin'ny teknolojia izay toa vahaolana lehibe azontsika ampiharina amin'ny marketing. Mampalahelo fa raha ny hevitro dia tsy anisan'ireny mihitsy ny kaody QR. Manana an'ity zavatra tsy mampino antsoina hoe Internet ity izay manamora ny fanoratana URL na teny fikarohana fotsiny izahay ary mahita izay ilainao. Amin'ny fotoana isintomako ny finday avo lenta, sokafy ny app scanner code QR ahy, ary sokafy ary mankany amin'ny URL… Azoko natao ny nanoratra azy fotsiny. Tsy ilaina fotsiny ny kaody QR fa ratsy tarehy ihany koa. Tsy te hahita azy ireo amin'ny fitaovan'ny marketing aho. Vahaolana tsara kokoa dia URL fohy, fandefasana kaody fohy ary fahazoana rohy amin'ny valiny, na fananana URL mahafinaritra fotsiny eo amin'ny tranokalanao hampahafantaran'ny olona ny fitsidihany.
Facebook Advertising - Lazaina aminao ny marina fa mampiasa doka amin'ny Facebook aho ary nahazo valiny tsara tamin'ny sasany tamin'ny fampielezan-kevitra novonoinay. Nihena ny vidiny ary betsaka ny fotoana kendrena… saingy mbola tsy vitako ny tsy nahatsapa fa mbola tsy azon'ny Facebook tsara ilay maodely. Ao amin'ny finday Facebook dia feno doka an-taonina ny renirako. Ao amin'ny tranonkala, tsy afaka ny tsy hieritreritra aho fa mandoa doka indraindray amin'ny fidirana rindrina izay tokony haseho. Ka… manafina ny atiny ny Facebook ary avy eo mampandoa ahy amin'izany. Yuck.
Google+ - Tiako ny misy mpifaninana amin'ny Facebook fa sahirana manokana aho any. Rehefa mitranga ao amin'ny Facebook ny 99% amin'ny resaka dia tena sarotra amiko ny mampihatra ilay ezaka ao amin'ny Google+. Google dia nanao asa tsara tamin'ny olona mahery fiadiana amin'ny fampiasana Google+ - miaraka amin'i -mpamorona ary toekarena ao an-toerana fampidirana. Nanampy endri-javatra mahafinaritra be dia be izy ireo niaraka tamin'ny vondrom-piarahamonina sy ny fantsona… fa ny resaka eo amin'ny fiarahamonina misy ahy dia tsy mitranga eo. Manantena aho fa hiova izany.
mailaka Marketing - Ny orinasa rehetra dia tsy maintsy manana programa mailaka. Ny vidin'ny isaky ny mailaka azo avy amin'ny mailaka dia mbola anisan'ny matanjaka indrindra raha ampitahaina amin'ny tetikady marketing. Mino aho fa very ny marketing amin'ny mailaka, satria tsy mandroso. Mbola mila mamolavola lamina latabatra 20 taona ihany isika satria tsy misy fandrosoana ataon'ireo mpamatsy fampiharana boaty lehibe toa an'i Microsoft Outlook. Toa ho mora ny manara-maso mailaka, manome làlana ho an'ny hafatra manokana, dokam-barotra, ary valiny.
Marketing finday - tsy misy fisalasalana mihitsy amin'ny firoboroboan'ny finday sy ny fampiasa finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Internet. Tsotra sy tsotra, raha tsy mampiasa vola amin'ny tranokala finday, fampiharana finday ary koa fandefasan-kafatra an-tsoratra amin'ny finday ianao dia manome ampahany lehibe amin'ny tsena. Fanamarihana manokana momba an'io… Mitsidika ny ray aman-dreniko any Florida aho izao ary nividy iPhones izy ireo. Rehefa mieritreritra momba ny mpampiasa teknolojia antonony ianao dia azonao antoka fa tsy ray aman-dreniko io.
Content Marketing - ny fitomboan'ny rindranasa finday sy ny fikarohana finday, ny fanarahana ny Internet ho fomba fikarohana ary ny fiovan'ny fitondran-tena miantsena amin'ny drafitra, fikarohana ary fividianana amin'ny alàlan'ny Internet dia mitaky ny fananan'ny orinasanao votoaty hanohanana ny fifandraisana sy ny fifandraisana ara-tsosialy. Na dia mitohy miroborobo aza ny bilaogy ataon'ny orinasa toy ny paikady ifotony, ny famolavolana infografika, fizarana votoaty sosialy, eBooks, Whitepapers ary horonan-tsary dia nahazo vokatra tsara kokoa noho ny hatramin'izay.
Marketing eo amin'ny tontolon'ny - mety ho hitanao ao amin'ny Martech fa rehefa mahita lahatsoratra manokana ianao dia mahita dokam-barotra manokana ao amin'ny sisiny koa. Ireo antso-to-hetsika mavitrika ireo dia voalamina ho azy… mampifanaraka ny atiny amin'ny antso hanatsarana ny fifandraisan-davitra, ny tsindry click-through ary ny fivadihana farany. Ny teknolojia mavitrika hanolotra fampahalalana tsara kokoa mifototra amin'ny atiny dia mitombo laza ary lasa mora vidy amin'ny ankamaroan'ny orinasa.
Marketing marketing - Ny fomba fanaovana dokambarotra be dia be mety ho lafo isaky ny mpijery, saingy tsy manana ny karazana fiantraikany ateraky ny fampifangaroana ny influencer. Manana fanohananana ato amin'ity bilaogy ity izahay izay mahazo valiny mahafinaritra - saingy ny tombony azo dia mihoatra noho ny tsindry fotsiny. Miara-miasa amin'ireo orinasa amin'ny tetikadin'izy ireo izahay, mampiditra tantara momba azy ireo amin'ny fampisehoana sy kabary ataonay, ary lasa mpitondra teninay ivelany momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo izahay. Misy fiantraikany amin'ny indostria izahay ary ireto orinasa teknolojia marketing ireto dia vonona ny hampiasa vola amin'ny mpihaino anay. Fampiharana vaovao mahafinaritra toa Vorona kely manome rindranasa hahitana sy hitadiavana ireo mpihaino ireo sy ireo izay mitaona azy ireo.
Video Marketing - Mitohy ny fidinan'ny vidin-dahatsary ho an'ny horonantsary natao ho matihanina manerana ny firenena. Izay manana smartphone dia afaka mamorona horonan-tsary avo lenta - ary ny fampiharana toa ny iMovie dia manamora ny fanatsarana azy amin'ny mozika, manampy feon-kira, fonosana sary vitsivitsy ary manosika ny Youtube sy Vimeo moramora. Ny horonan-tsary dia fitaovana mandresy lahatra ary mahasarika mpanatrika marobe izay mety tsy hanam-potoana hamakiana.
Fanamarihana mendri-kaja mpandresy is Twitter. Mahita resaka be dia be momba ny fampiasana Twitter ataon'ny governemanta, ny fivavahana, ny mpianatra ary ny fikambanana hafa mampiasa ny Twitter amin'ny fomba mahomby aho hifandraisana amin'ny be sy ny maro (sazy natao ho an'ny ny Papa!). Twitter dia mitovy fiaraha-miasa amin'i Nielsen amin'ny fanomezana isa naoty ho an'ny haino aman-jery nentin-drazana.
Inona no tsy hitako? Hanaiky ve ianao?
Tags: fanovana rohybacklinksContent Marketingcontextualmailakamailaka Marketingfacebook adsGoogle +hery miasa manginaLahatsary MarketingFivarotana finday sy tablettefinday-barotraQR CodesTwitterMarketing amin'ny Twitter
Fironana amin'ny Internet sy finday 2012
Serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny haino aman-jery sosialy
Jan 10, 2013 ao amin'ny 6: 46 AM
Nanaiky fa mampiady hevitra ny backlinks sy ny SEO taloha, saingy mieritreritra aho fa mbola misy fiantraikany amin'ny asan'ny mpivarotra tamin'ny taona 2013. Mazava ho azy fa tokony hatsangana voajanahary sy manaraka ny fomba fanao tsara izy ireo. Tetikasa famoahana izany ho an'ireo izay nanandrana nanao hosoka fotsiny. Mino koa aho fa ireo mpandresy ny tetika marketing tamin'ny 2012 dia
hiroborobo amin'ny 2013 ary hitombo ny dikany. Izahay ao amin'ny $ earch dia mikasa ny hampivelatra ny varotra horonantsary miavaka. Tsy misy fomba fahandro mahomby fa rehefa mamorona marika miavaka miaraka amina paik'ady mifangaro tsy misy fomba iray hahatongavana ho resy ny orinasa iray.